Kunamata Points Kupesana neMweya weMweya | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Kupesana neMweya weMweya
Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoints tichipesana nemweya wegungwa. Midzimu yemakungwa mumiriri werima kubva pakadzika kwegungwa kana gungwa. Muvengi anoshandisa aya maajenzi kuongorora kukura kwevanhu nekuvaunza pasi vachishandisa nzira dzakasiyana kana nzira. Zvinokufadza iwe kuti uzive kuti vamiririri ava vanorwisa vanhu zvichibva parudzi rwechibvumirano chiripo pakati pavo neavo vavabira.
Pane zviitiko izvo, vabereki enda kumweya uri mumvura kunokumbira mwana achikanganwa kuti zvipo zvese zvakanaka zvinobva kuna Mwari chete. Kana izvi zvikakura kuita murume nemukadzi, ivo vanotanga kusangana nedambudziko kubva kugungwa nyika. Apa ndipo paunonzwa nyaya dzemweya murume kana mumweya mukadzi. Kune dzimwe nzira dzinogona kuitwa nemurume kuita mweya weMweya wegungwa. Imwe yedzakajairika nzira ndeye kuburikidza nebonde zvivi.
Rangarira Mwari akaraira kuti usaite hupombwe kana hupombwe. Chimwe chezvikonzero nei Mwari vakaraira vana Vavo kuti vasiye zvivi zvebonde ndechekuvaponesa kubva panjodzi yemweya wegungwa. Kusangana pabonde inzira yeChipangano inosanganisira ropa. Kana murume akaroora kana kuroora akarara nemukadzi anobva kugungwa, apinda muchibvumirano naye nekusaziva. Ndosaka tichiona munyika nhasi, varume ndivo vanonyanya kubatwa nemweya wegungwa.
Iyi mweya inogona kukonzeresa dambudziko remari muhupenyu hwemurume. Ainamata kuna Mwari nekutsanya asi hapana chinoitika. Akadaro murume achaenda kubvunzurudzo huru dzebasa, achipindura mibvunzo yese nenzira kwayo zvakadaro aisazowana basa. Sangano rinopa basa kune chero ani zvake kunze kwake. Zvakare, mweya wegungwa unogona kukanganisa roorano yemunhu. Chekutanga, zvinogona kutadzisa munhu kuwana wekuroora wekugara naye uye kunyangwe paanozoroora, vanogona kunge vasina mwana. Dzimwe nyaya dzinogona kunge dziri kuti mukadzi wemunhu anotambudzwa nemweya wegungwa haazive zororo mumuchato iwoyo.
Kune nzira dzakasiyana siyana mweya yakaipa iyi inoshungurudza nyama yavo. Nhasi Mwari vachakusunungura kubva mumusungo wemweya wegungwa. Anotyora kubata kwemweya wegungwa pamusoro pehupenyu hwako uye Iye anomisa rusununguko rwako. Kana iwe uchigara uchirota kuti iwe unorara nemukadzi mumvura kana iwe uchizviona uchinetseka mukati megungwa rine simba, chiratidzo chikuru chekuti urikutambudzwa nemweya wegungwa. Ngatinamatei pamwe chete tichishandisa zvinotevera munamato.
Baba ishe, ndinoramba mubatanidzwa wese, hukama hwese pakati pangu nenyika yegungwa nhasi, muzita raJesu. Ndakaisa pakati pemuchato wese wekusagadzikana pakati pangu nenyika yegungwa nesimba muzita raJesu.
Ishe, ndinoramba chisungo chese chemadhimoni chiripo pakati pangu nenyika yegungwa, ndinoramba zvibvumirano zvakadaro muzita raJesu. Ishe, ndinosunungura moto waMwari Wemasimbaose pamusoro pemumiririri wega wega ari kuongorora hupenyu hwangu, ndinoraira kuti mumiriri akadaro awire murufu muzita raJesu.
Tenzi, chibvumirano chese chakaipa chandapinda nokusaziva nekuda kwechivi changu, ndinonamata kuti moto waMwari uparadze Sungano dzakadai muzita raJesu. Ini ndinoshandisa ropa rinotaura kururama kupfuura ropa raAbheri kuparadza zvisungo zvese zvakaipa pamusoro pehupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Ishe, mbeu yose yenyika dzegungwa muhurongwa hwangu, ndinoparadza nhasi nemoto. Yese mbeu yemadhimoni yakaiswa mandiri kubva kugungwa, ndinonamata kuti moto waMwari uvaparadze muzita raJesu.
Baba ishe, ndinoburitsa kutsamwa kwaMwari kunopesana neanose marine mumiririri anomira pamusoro pehupenyu hwangu nhasi muzita raJesu. Rugwaro runoti kana ndadaidza zita raIshe, vavengi vangu vachatiza. Ishe, ndinoshevedzera kwamuri nhasi, ndinonamata kuti muite kuti mweya yega yega yegungwa itize kubva pamberi pangu nhasi muzita raJesu.
Tenzi, nhamo dzese dzandapinda nadzo nekubatana nemweya wegungwa, ndinokuparadza nhasi muzita raJesu. Ishe, matambudziko ese nematambudziko ari kusangana neni nekuda kwekubatana nemweya wemumvura, ndinonamatira mhinduro dzinokurumidza muzita raJesu.
Ishe, zvese zvinokanganisa zvegungwa pamusoro pewanano yangu, ndinozviparadza nhasi muzita raJesu. Ishe, zvese zvirongwa zvegungwa pamusoro pemuchato wangu zvinoparadzwa nemoto wemweya mutsvene.
Ishe, ndinoburitsa kutsamwa kwaMwari pamusoro pemurume wese wemumvura kana mukadzi achinditadzisa kugadzikana muhupenyu. Ndinonamatira kubatana kwaMwari pakati pangu nemukadzi wese wegungwa muzita raJesu.
Baba ishe, ndinonamatira rubhapatidzo rwutsva rwemoto hunozoshandura zvese zvinondinetsa nekupisa zvakaipa zvese zvakandikomberedza kuita madota muzita raJesu
Ishe Jesu, maropafadzo ose nehupfumi hwakabiwa kwandiri uye hwakachengetwa mubhatani regungwa, buda uuye kwandiri muzita raJesu. Ishe, sekuwana kwamakaita demo rakawira mumvura, ndinonamata kuti muwane chishamiso pfuma yose yandakabirwa nenyika yegungwa muzita raJesu.
Ishe, mutongo wese nekutongwa kwenyika dzegungwa pamusoro pehupenyu hwangu zvakaparadzwa muzita raJesu. Ndinoraira kuti kutonga kwaMwari kuchamira pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa, ndiani unotaura uye zvinoitika kana Mwari asina kutaura? Ndinobvisa kutonga kwese kwepasi pemvura pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Ishe, mhuka dzese dzemumvura dzakatumirwa kwandiri kubva kugungwa, ndinokuraira kuti uzviuraye nhasi muzita raJesu. Ndinoraira nyoka dzese dzinobva kugungwa dzakatumirwa kumedza maropafadzo angu, zviuraye nhasi muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Pfungwa Kukunda Kushushikana SeMutendi
inoteveraZvikonzero zvishanu Zvinoitika Kuti Tive Nemuedzo
Hondo dzeMweya Minamato Yekurwisa Vavengi
Mavhesi eBhaibheri Nezvevanaamai